राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भर्खरै माध्यामिक शिक्षा परीक्षा ‘एसईई’ कक्षा १० को नतिजा प्रकाशित गरेको छ । नतिजा प्रकाशनसँगै अहिले ४ लाख २५ हजार विद्यार्थीले उच्च तहमा अध्ययनका सर्टिफिकेट हातमा लिएर विद्यालयको खोजीमा छन् । के शहर–के गाउँ सबैतिर विद्यार्थीलाई कहाँ पढ्ने ? के विषय रोज्ने ? चिन्ताले सताएको छ । अभिभावक पनि उपयुक्त शैक्षिक गन्तव्य छान्ने चौतर्फी पिरलोमा छन् यतिबेला ।
बोर्डको अक्षरांकन प्रणाली बमोजिम कम्तिमा १.६ देखि ४ जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले माथिल्लो तह अध्ययन गर्न पाउँछन् । यस वर्ष ४ लाख २५ हजार विद्यार्थीले उक्त जीपीए प्राप्त गरेका छन् । यो कूल सङ्ख्याको ८८ प्रतिशत हो । विगतमा प्रतिशत परीक्षा प्रणालीमा ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने भएपनि अक्षरांकनमा त्यो समस्या केही घटेको छ । तर, शैक्षिक स्तरमा भने सुधार नआएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।
अर्कोतिर अभिभावकले राम्रो विषय छान्नुपर्छ भन्ने दबाव झेल्दै छन् विद्यार्थी । कलेज–कलेज पुग्नु ब्रोसर बोक्नु उनीहरूको दिनचर्या बनेको छ । निजी कलेज सञ्चालकहरू मिडियामा ठूलठूला विज्ञापन गरेर विद्यार्थी तान्ने होडबाजीमा छन् । काउन्सिलिङका नाममा विद्यार्थीलाई चाहिने/नचाहिने प्रवचन सुनाउने गरिएको छ । निजी कलेजहरू काठमाडौं लगायत शहरी क्षेत्रमा एसईई परीक्षाका बेला नै परिक्षार्थीलाई आफ्ना ब्रोसर भिडाएर विज्ञापन गरेको प्रतिफल खोज्न तल्लीन छन् । उनीहरूका दृष्टिमा यो ठिकै पनि होला ।
तर, मुलुकको वर्तमान शिक्षा नीतिबाट उत्पादित जनशक्तिबाट समाजले कस्तो गन्तव्य पाउला ? यो अहम् प्रश्न हो । सरकारले प्रारम्भिक जनशक्तिका रूपमा समेत कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई लिएको अवस्था छ । एउटा विद्यार्थी जो आफ्नो भविष्य कोर्न एसईईको प्रमाणपत्र हातमा लिएर उभिएको छ । उसका अगाडि थुप्रै चुनौती र सम्भावना छन् । कलिलो मस्तिष्क त्यो चिन्न सक्ने अवस्थामा देखिन्न ।
विद्यालयल सञ्चालक बढीभन्दा बढी विद्यार्थी तान्ने र उत्कृष्ट ग्रेडिङका विद्यार्थीलाई फकाउने अनि ‘इन्ट्रान्स’ को आतंक देखाएर गुणस्तरीय शिक्षाको धाक दिइरहेका छन् । सरकारी विद्यालयहरू भने लयमा छैनन् । ‘आए आप गए झटारो’ को स्थितिबाट गुज्रिँदा छन् । २ वर्षअघि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा परेको कक्षा ११ र १२ को शिक्षा यता न उता ‘भीरको चिण्डो’ भएको छ ।
यसै सन्दर्भमा अमरवाणी अनलाइनले कक्षा ११ मा के पढ्ने ? टिनेजर्स विद्यार्थीले कलेज छान्दा के–केमा ध्यान दिने ? कस्ता विषय पढ्दा करियर राम्रो बन्छ ? समाजमा अब्बल बन्न कुन मार्ग समात्ने र गुणस्तरीय शिक्षा के हो ? भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर बुधबार लामो अवधि शिक्षण पेशामा तल्लीन व्यक्तित्व, प्राचार्य र कलेज सञ्चालकहरूसँग राउण्ड टेबल छलफल गरेको थियो । प्रस्तुत छलफलमा सहभागीहरूको धारणाः
विज्ञापनको ठूलो रकम जायज छैन
केशव प्रसाद दंगाल, कार्यकारी अध्यक्ष, सेन्ट लरेन्स कलेज, चावहिल
शैक्षिक क्षेत्रमा समानान्तर संस्थाहरुबीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुनु आवश्यक छ । काठमाडौँको पूर्वी भेगमा अवस्थित शैक्षिक संस्थाले आफ्नो भौतिक पूर्वाधारको विकासमा पर्याप्त लगानी गरेका छन् । यो नै शिक्षा क्षेत्रको राम्रो पक्ष हो । जहाँसम्म गुणस्तरीय शिक्षाको सवाल छ, यस भेगका शैक्षिक संस्थाहरुले अन्य नकारात्मक विषयमा भन्दा सकारात्मक भई आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई विद्यार्थीमुखी बनाउनु आवश्यक छ । प्रमुख विषय नै विद्यार्थीप्रतिको जिम्मेवारी हो ।
विद्यार्थीलाई राम्ररी पढाउने सवालमा रहेको प्रतिस्पर्धालाई राम्रो मान्न सकिन्छ । राजधानीका केही कलेज र विद्यालयहरुले विद्यार्थी भर्नाका लागि खुलेरै विज्ञापन गरेको पाइन्छ ।
मेरो विचारमा हाम्रा शैक्षिक संस्थाले विज्ञापनमा ठूलो रकम खर्च गर्नु राम्रो होइन । विज्ञापनमा खर्च गर्ने रकम गरिव तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुको छात्रबृत्तिमा लगाएको खण्डमा धेरै विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छन् । यो हामीजस्ता संस्थाहरुको राष्ट्रिय दायित्व पनि हो । विज्ञापनमा केही अपवाद भने हुन्छन्, जस्तो कि आफ्ना उत्पादन तथा सेवाको जानकारी विद्यार्थीलाई र अविभावकलाई दिने खालका विज्ञापन लाई भने ठीकै मान्न सकिन्छ ।
सेन्ट लरेन्स कलेज २२ वर्षदेखि शैक्षिक यात्रामा छ । रिङ रोडबाट नजिक चावहिल केन्द्रमा रहेको कलेज विद्यार्थीलाई सहि बाटोमा डोर्याउन तल्लीन छ । विद्यार्थी भर्नाका लागि अभिभावक विश्वास, विद्यार्थीको रुचिका विषयहरु, शैक्षिक संस्थाको ख्याति र हैसियतलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ । हामीले विद्यार्थीहरुका लागि प्रयोगात्मक शिक्षा दिने शैक्षिक संस्था रोज्नु पर्छ ।
विद्यार्थी किनबेच रोकिनुपर्छ
चन्द्रप्रसाद पन्त, सहायक क्याम्पस प्रमुख पशुपति बहुमुखी क्याम्पस,मित्रपार्क,चावहिल
मुलुकमा दुई खाले शिक्षा प्रणाली विद्यमान छ । सामुदायिक विद्यालय र निजी । अहिले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा विद्यालय तहमा गइसकेको छ । यस सन्दर्भमा कस्ता विद्यालय राम्रा त ? यो अहम् प्रश्न हो । सरकारले विद्यालय खोल्ने अनुमति प्रदान गरेको छ । तर,कुन विद्यालय कुन स्तरको हो त्यसको मापन भने गरेको देखिदैन । विद्यार्थीको क्षमता/ल्याकत वास्तवमा विद्यालयले नै बुझ्नुपर्ने हो । तर,हामी कहाँ त्यस्तो भएको देखिदैँन । नेपाली विषयमा ९० नम्बर ल्याउने विद्यार्थीलाई विद्यालयले सर्टिफिकेटमै तिमी साहित्य विद्याका लागि ठिक छौ भनेर उसको क्षमता पहिचान गरिदिनुपर्छ ।
कक्षा ११ पढनका लागि विद्यालय फेर्ने होइन । विद्यार्थीले छानेको विषय नभएमा मात्र अर्कोमा जाने हो । तर,यहाँ त विद्यार्थी ‘किनबेच’ भइरहेका छन् । जिपीए, खेलकूद र छात्रवृत्तिका नाममा कमिसन दिएर विद्यार्थी भर्ना गराउने परिपाटी छ निजी कलेजमा । यो रोकिनुपर्छ । प्राइभेट कलेजहरूले शिक्षामा जति नै गुणस्तर प्रदान गरेको फूर्ति लगाएपनि तिनका उत्पादन नेपालका लागि भन्दापनि विदेशका लागि तयार पारिएका छन् । यो स्वीकार्नै पर्ने हुन्छ । विदेशका लागि तयार पारिने जनशक्तिले नेपाललाई के दिन्छ ? यो मननीय प्रश्न छ ।
अर्को विद्यार्थी तान्न ठूलाठूला होर्डिङ बोर्ड विज्ञापन गर्ने अनि बालबालिकालाई संस्कार सिकाउन नसक्ने ? ठूलो सङ्ख्यामा टिन एजर्स विद्यार्थी कूलतको सिकार भएका छन् त्यसमा हाम्रा शिक्षण संस्था जिम्मेवार बन्ने कि नबन्ने ? हो अहिले धेरै विद्यार्थी कलेज खोजीमा भौतारिएका छन् । उनीहरू विज्ञापनमा निर्भर हुने कि साथीभाइको लहलहैमा लाग्ने कि अभिभावकको चाहना बमोजिमको कलेज खोज्ने त्रिपक्षीय दबावमा देखिन्छन् ।
सबैले साइन्स नै पढनुपर्छ, व्यवस्थापन नै पढनुपर्छ भन्ने छैन् । विद्यार्थीले रुचिको विषय पढने हो । त्यो वातावरण अभिभाव, राज्यको शिक्षा नीति र शिक्षण संस्थाहरूले बनाइदिने हो । अर्को शिक्षामा राज्यले कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक हो त्यो मापन भएको देखिन्न । चिकित्सा र इन्जिनीयरिङतर्फ त्यस्तो छैन,त्यसकारण विदेशबाट समेत यहाँ पढन आउछन् ।
अहिलेको शिक्षा प्रणालीलाई कम्युनिष्टले बुजुर्वा शिक्षा भन्छन् । सरकारको नेतृत्व उनीहरूले नै गरेका छन् । तर, शिक्षा प्रणालीमा रत्तिभर पनि परिवर्तन गरेका छैनन् । झन निजीकरणलाई प्रोत्साहन गरिराखेको अवस्था छ । यो नीति त्यो अवोध भर्खर कलेज पाइला टेक्दै गरेका विद्यार्थीलाई के थाहा ? विद्यार्थीको मापन गर्ने परीक्षा प्रणाली देख्दा दिग्दार लाग्छ । लामो समयदेखि म उच्च शिक्षाका परीक्षाहरू निकट रहेर नियाल्दै आएको छु । परीक्षा केन्द्रदेखि उत्तरपुस्तिका जाँच्ने बेलासम्म सेटिङ छ । सबैलाई भन्दिन् तर यसमा पनि निजी कलेज सञ्चालक नै अगाडि छन् । यस्ता कार्यले विद्यार्थीको सिकाइको स्तर निकै खस्केको छ । यो चिन्ताको विषय हो ।
नैतिक र व्यवहारजन्य शिक्षा प्रदानमा गर्न नसकिएको अर्को सत्य हो । त्यसका पनि थुप्रै कारण छन् । इन्टरनेट प्रविधिले विश्वलाई औलामा कैद गरेको छ, त्यसको प्रभाव आमसर्वसाधारणम त परेको छ भने कलेज पढ्ने विद्यार्थीमा नपर्ने कुरै भएन । प्रविधिको राम्रो पक्ष प्रयोग गर्न विद्यार्थीलाई प्रेरित गर्ने हो । यो नियन्त्रण गरेर साध्य चल्दैन । नियन्त्रण गर्ने अधिकार कलेजसँग हुन पनि हुँदैन् ।
‘ब्लाइन्ड’ सुझावका आधारमा कलेज छान्दा धोका
घनश्याम राज काफ्ले प्राचार्य, पशुपति मित्र मावि, चावहिल
कक्षा ११ कहाँ पढ्ने ? के विषय रोज्ने विषयमा विद्यार्थी अन्यौलमा छन् । अभिभावकको दवाव पनि थोपारिएको छ । यति जीपीए ल्याएपछि यो विषय पढनुपर्छ भन्ने ‘ब्लाइन्ड’ सुझावको सिकार बनेका छन् बालबालिका । दवावमा विषय छान्नु राम्रो होइन, पहिला विद्यार्थीले आफ्नो रूचि के विषयमा छ त्यसमा ध्यानदिनु पर्छ । विद्यार्थीमा परामर्शको कमी छ । भर्खर एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीले छिट्टै निर्णय दिने क्षमता राख्दैनन् ।
साथीभाइको लहलहीमा लाग्नु राम्रो होइन । यसले राम्रो परिणाम दिदैँन । कलेजको भवन मात्र नहेरी पहिला आफ्नो आर्थिक हैसियतलाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । अर्को विद्यार्थीले आफ्नो जीवनको लक्ष्य के हो रु त्यो निर्धारण गरेर विषय छान्दा भविष्य राम्रो हुन्छ । सरकारी शिक्षण संस्थामाथि थुप्रै प्रश्न तेर्सिएको अवस्था छ । र, सरकारीमा विद्यालयमा पढने बालबालिका ‘अनक्लेम्ड चाइल्ड’ बनेको अवस्था छ ।
यो दुखद पक्ष हो । अहिले निजी विद्यालयका सञ्चालकले गर्व गर्नुपर्ने र सामुदायिक विद्यालयले बोध गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसपटकबाट पशुपति मित्र माविले पनि कक्षा ११ मा मानविकी, व्यवस्थापन र शिक्षा संकायमा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
चौतर्फी ज्ञान दिने शिक्षणसंस्था छान्दा राम्रो
श्याम सुन्दर श्रेष्ठ (प्रिन्सिपल) टेक्सास इन्टरनेशनल कलेज, मित्रपार्क, चावहिल
गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता हो । अझ २१ औं शताब्दीमा मान्छे अगाडी बढ्न ‘स्मार्ट’ शिक्षा चाहिन्छ । यो भन्नुको अर्थ व्यक्ति सफल बन्न चौतर्फी ज्ञान आवश्यक पर्छ । शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर विश्व सन्दर्भ अनुसार आफ्ना कुराहरू राख्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । शिक्षाले मानवको सर्वाङ्गीण विकास गर्नु सक्नुपर्छ ।
कक्षा ११ मा पाइले टेक्दै गरेका विद्यार्थीहरूको गन्त्व्य यिनै विशेषता बोकेका शिक्षण संस्थामा हुनुपर्छ । विद्यार्थीको सर्वाङगीण विकासको लागि पढाईसँगै अतिरिक्त क्रियाकलाप जरुरी हुन्छ । यसलाई ‘को–करिक्यूलर’ गतिविधि पनि भनिन्छ । अर्को तिर हाम्रो आवश्यकता व्यावसायिक शिक्षा पनि हो । तसर्थ अविभावकले कलेज छनोट गर्दा कलेजको रिजल्ट,फ्याकल्टी मेम्बर र त्यहाँ उत्पादित जनशक्तिको उपादेयता आदि हेर्नुपर्छ । टेक्ससले मन्टेश्वरी स्कुलदेखि मास्टर डिग्रीसम्म शिक्षा कोर्षहरु सञ्चालन गरिरहेका छ ।
कक्षा ११ देखि मास्टर्ससम्म हामीले विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र कानुन संकाय अन्तर्गत विभिन्न विषयहरु अध्यापन गर्दै आएका छौ । । त्यतिमात्र होइन कलेजले विश्व परिवेशलाई सुहाँउने वीआइएम, वीसीए, वीवीए र विएस्सी सिएस आइटी जस्ता विषय पठनपाठन गराउँदै आएको छ । यसपाली देखि हामी वीएचएम कोर्ष सञ्चालन गर्न लिङ्कन विश्वविद्यालयसँग लिंक गरेर टेक्सस कलेज अफ आइटी सञ्चालन गरिरहेका छौं ।
आफूलाई उपयुक्त हुने विषय छान्नुहोस्
मोतीराम फुयाल,प्रिन्सिपल, सेन्टिनियल हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा कुटुम्ब कलेज, जोरपाटी
विद्यार्थी कलेज छनोटका विषयमा अन्यौलमा देखिन्छन् । किनकी हाम्रो काउन्सिलिङ गतिलो छैन । कस्तो कलेज पढ्ने ? कुन विषय रोज्ने भन्ने कुरा विद्यार्थीको अधिकार र इच्छा चाहानामा निर्भर गर्छ । मेरो सल्लाह विद्यार्थी भाइबहिनीलाई के छ भने विद्यार्थीले पहिला आफ्नो नेचर, आफूलाई उपयूक्त हुने विषय, अवस्था र पायक पर्ने क्षेत्रको कलेज छनोटमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
त्यतिमात्र होइन पूर्वाधार, कक्षाको वातावरण, रिजल्ट आदि पक्ष पनि मननीय छन् । हाम्रा विद्यालयले पढाउँदा विद्यार्थीको दिमागको ढोका खोलिदिएका छन् कि छैनन् त्यो हेर्नुपर्छ । अन्यथा विद्यार्थीलाई कलेज छनोटमा राज्यको दायित्व पनि प्रमुख हुन सक्छ । हामीले विद्यार्थीलाई शिक्षासँगै संस्कार दिनु आवश्यक छ ।
दबावमा कलेज छान्दा धोका हुन्छ
दुर्गानाथ सिवाकोटी प्रिन्सिपल, सर्वनाम शिक्षालय कलेज, जोरपाटी, काठमाडौं
विद्यार्थीलाई स्कुल तहमै ‘काउन्सिलिङ’ गर्नु जरुरी देख्छु म त । ए प्लस ल्यायो भन्दैमा फलानो विषय पढनुपर्छ भनेर हौसला दिनु राम्रो होइन । उसको वास्तविक शैक्षिक धरातल बुझेर मात्र सल्लाह दिनुपर्छ । लहलहीमा विषय छान्दापछि धोका मिल्छ । त्यसैले आफ्ना गच्छले भ्याउने र रुचिको विषय पढ्दा राम्रो । विषय छान्दा बालबालिकालाई दवाव दिनु हुँदैन । सही गन्त्व्य पहिँचानका लागि सही सल्लाह आवश्यक हुन्छ । होर्डिङ बोर्ड, ठूला–ठूला भवनमात्र विद्यालय छनोटका आधार बन्नु हुँदैन ।
माथिल्लो तहलाई लक्षित गरेर विषय छान्ने
भीमप्रसाद कोइराला सह–प्राचार्य सरस्वती सेकेण्डरी स्कूल/परीक्षा संयोजक बज्र इन्टरनेशनल कलेज, जोरपाटी
कक्षा ११ विद्यार्थीको उच्च शिक्षाको पहिलो पाइला हो । यो तहमा धेरै खर्च गरेर ठूलाठूला कलेज रोज्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई । अहिलेको नियमअनुसार त कक्षा ११ र १२ विद्यालय तह नै हो । खर्च गर्ने र करियर सेट गर्ने त स्नातक तहमा हो । त्यसलै माथिल्लो तहमा जुन विषय पढ्ने इच्छा छ सोबमोजिमको विषय छान्न भने चनाखो हुनुपर्छ ।
कक्षा ११ मा जीपीएलाई मात्र आधार मानेर विषय छोनेको खण्डमा त्यो घातक हुनसक्छ । कलेज छान्दा नजिकको कलेज छान्दा राम्रो हुन्छ । विद्यार्थीले के बुझ्नु पर्छ भने कलेजहरुले मिडियामा विज्ञापन छाप्ने भनेको विद्यार्थीकै फिबाट हो । विज्ञापन छाप्ने मात्र राम्रो भन्ने भ्रममा नपरौं । नजिकको कलेजमा जाने हो भने विज्ञापन नै चाहिँदैन ।
गुणस्तरीय शिक्षा के हो भनेर बुझाउन सक्नुपर्छ
मदन सुवेदी, क्याम्पस प्रमुख आकाशदीप कलेज, जोरपाटी
विद्यालय छनोटका विषयमा कक्षा ११ पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई पर्याप्त हुँदैन । उनीहरुले स्कुलमा जति सुनेका हुन्छन, त्यतिकै भरमा निर्णय लिन्छन । जसले गर्दा विद्यार्थीहरुमा अध्ययन गर्ने विषयमा अपरिपक्क निर्णय लिनसक्ने खतरा हुन्छ । यसतर्फ हामी सबैले ध्यान दिनु आवश्यक छ । अविभावक र विद्यार्थी दुवैलाई उनीहरुको भावना अनुरुपको उचित परामर्श आवश्यक छ, ।
विद्यालय छनोटका आधारहरुमा, हामीसँग फरक फरक शैली विकास भइरहेको छ । जसको मार हामीहरु सबैले भोगिरहेका छन । हाल गोकर्णेश्वर नगरपालिका भित्र २० भन्दा माथि प्लस टु कलेजहरु खुलेको पाइन्छ । हामीले पूर्वी भेगमा रहेका कलेजहरुले शैक्षिक प्रदर्शनी गर्नु आवश्यक छ । हिजो विकल्प थिएन, तर आज यस भेगमा व्यापक विकल्पहरु छन । यहाँ त जसले कक्षा १० का विद्यार्थीले जुन विद्यालयमा पढेर ४ जिपीए ल्याउँछ, उसैले आफ्नो विद्यालयलाई कक्षा ११ मा हामीलाई विश्वास गर्दैनन् । किन त ? त्यसको खोजी गर्ने बेला भइसकेको छ ।
अहिले बच्चा कलेज पढ्न चाहन्छ, स्कूल पढ्न चाहदैन । मैले यस भेगमा भवनलगायतका शैक्षिक पूर्वाधार बनाएँ, तर कक्षा सञ्चालनमा अझै संघर्ष गरिरहेको छु । हामीले गुणात्मक शिक्षा यही छ भन्ने अनुभूति विद्यार्थी र अविभावकलाई गराउन आवश्यक छ । आधिकांश विद्यार्थीहरु नेपालमा कक्षा १२ अध्ययन गरेर विदेश जाने लक्ष्यका साथ हामीकहाँ आउँछन् । उनीहरूलाई कसरी टिकाउने चुनौती विद्यालयसँग पनि छ ।
हाम्रो प्राथमिकता पर्यटन शिक्षामा
राजकुमार श्रेष्ठ, होली एन्जल्स पब्लिक स्कूल, जोरपाटी
कक्षा ११ र १२ विद्यालय शिक्षाकै अंग भएकाले विद्यार्थीहरुलाई कुन कलेजमा अध्ययनका लागि जाने हो भन्नुभन्दा पनि कक्षा ११ कुन विद्यालयमा पढ्ने भन्ने प्रश्न गर्नु जायज हुन्छ । त्यस्तो विषय पढ्ने, जसले विद्यार्थीको भविष्य निर्माणमा सहयोग गरोस् । आफ्नो आर्थिक हैसियत र क्षमतालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
यहाँ कस्ता कलेजलाई राम्रो मान्ने भन्ने कुरा अनुसन्धानको विषय हो । विद्यार्थी भर्नाको लागि कलेजमा राखिने शैक्षिक परामर्शदाताप्रति मलाई विश्वास छैन । खासमा विद्यालयले कुनै एउटा क्षेत्रलाई समात्दा राम्रो हुन्छ । जस्तो हामीले ट्राभल टुरिज्मलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छौं । कसैले कानूनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसो भएमा विद्यार्थीलाई रुचिअनुसारको गन्त्व्य पहिल्याउन सजिलो हुन्छ ।
शैक्षिक वातावरण पहिलो सर्त
विष्णु पराजुली, प्रोग्रेसिभ माध्यमिक विद्यालय, महांकाल
विद्यार्थीले कलेज छनोट गर्दा उपयुक्त वातावरण, चुस्त व्यवस्थापन, राम्रा शिक्षकको उपस्थिति हेर्नु आवशयक छ । केही विद्यार्थी अरुको लहलहैमा लागेर कलेज भर्ना गर्ने गर्छन्, त्यो राम्रो होइन । हामीले जिपीएको पछि लाग्नु भन्दा पनि क्षमतालाई चिनेर कलेज छनोट गर्दा उचित हुन्छ ।
त्यस्तै आफू अनुकूल भएको नजिकको कलेजलाई ध्यान दिई सो कलेजको शिक्षकको अवस्था र रिजल्टमा ध्यान पु्र्याउनु उपयुक्त हुन्छ । सरकारले हाल चर्चामा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा नीति पूर्ण रुपमा लागू भएमा धेरै निजी स्कूलहरु मर्नेवाला छन् । यहाँ हामी मध्ये ६० प्रतिशतले शिक्षाको अवस्था बुझेर लगानी गरेका छैनौँ । जसलाई जे मन लाग्यो त्यही विषय राखेर कक्षाहरु चलाइरहेका छौँ । हामी जीपीएको पछाडि मात्र नलागौँ ।
बालबालिकको रुचि र क्षमता चिनेर विद्यालय छानौं
प्रेमसिंह श्रेष्ठ, प्रिन्सिपल सुिप्रम इन्टरनेशनल हाइ स्कूल, मैजुबहाल
मुलुकको शिक्षा प्रणाली निजी र सरकारी दुई खेममा विभाजित छ । निजी विद्यालयहरू शैक्षिक गुणस्तरमा अघि देखिएपनि संख्यात्मक रुपमा सरकारी विद्यालय नै धेरै छन् । शिक्षाको जग वास्तवमा विद्यालय शिक्षा नै हो । जसले विद्यालय तहमा राम्रो गर्छ उ माथिल्ला डिग्रीमा पनि अब्बल सावित हुन्छ ।
मेरो विचारमा १५ वर्षको उमेरमै बालबालिकाले ‘गोल सेट’ गर्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन । उनीहरू अभिभावक र साथीभाइबाट निर्देशित हुने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा विद्यालय छनोट गर्दा पहिले कलेजको इतिहास हेर्नु आवश्यक छ ।
कस्तो व्यक्तिले कलेज खोलेका छन ? त्यसलाई ध्यानदिनु आवश्यक छ । कलेजको रिजल्ट पनि अर्को मननीय पक्ष हो । कलेज छान्दा सकभर घर नजिक पायक पर्ने रोज्नु पर्छ । अविभावकको आर्थिक क्षमता अर्को पक्ष हो । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारका बालबालिकाले इच्छा अनुसारको विषय पढ्न सक्दैनन् । विद्यार्थीले फ्याकल्टी छान्दा आफू मिल्दो, देश सुहाउँदोर माटोअनुसारको हुन आवश्यक छ । बिडम्वना नेपालमा कृषि छान्ने अवस्था छैन । बाहिरकै उत्पादनले बजार धानेको छ ।
कलेज महँगो छान्दैमा गुणस्तर कायम हुदैँन
मोहनराज राई,सहायक क्याम्पस प्रमुख, जि.पी कोइराला सामुदायिक कलेज, चावहिल
विद्यालय छनोटका लागि ऐतिहासिक पृष्ठमूमिसँगै भौतिक अवस्था, शैक्षिक गुणस्तरलाई आधार मान्नु आवश्यक हुन्छ । कलेज महँगो छान्दैमा शैक्षिक गुणस्तर कायम हुन्छ नै भन्ने पनि त हुँदैन ।
सस्तो खालका सामुदायिक कलेजमा रहेको गुणस्तरलाई नजर अन्दाज गर्न कदापि मिल्दैन । त्यसैले कलेज छान्दा सस्तो, घरपायक, गुणस्तर, विद्यार्थीको रुचि र क्षमता अनुसार हुनु जरुरी छ ।
सिकाइकेन्द्रित विद्यालय राम्रा
नारायण नेपाल, उपप्राध्यापक, पशुपति बहुमुखी क्याम्पस, काठमाडौं
यहाँ शिक्षा अब समाजसेवा भएन व्यापारिक भयो कि भन्ने लाग्छ । मलाई सरकारी विद्यालय निजीका तुलनामा भनिए जति कमजोर छन् भन्ने लाग्दैन । यहाँ अधिकांश आफू सरोकार राख्छु भन्ने विज्ञहरू ठूला पल्टने तर विद्यार्थीलाई असल मात्र बन्नु पर्छ भन्ने मलाई ठीक लाग्दैन । देशमा शैक्षिक भ्रष्टाचार बढेको छ । यहाँ सेन्टरलाई नै प्रभावित गर्ने कार्य भएका छन् । तात्विक रूपमा सिकाइ खस्कँदो नै छ ।
विद्यालय जो पठनपाठनमा अब्बल कहलिएका छन् त्यतातर्फ जानु राम्रो । फेरि त्यहाँ पनि प्रचार/प्रसारमात्र हो कि साच्चै राम्रो शैक्षिक वातावरण छ त्यो पक्ष पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । कलिला विद्यार्थीले यसलाई बुझ्ने हैसियत त्यति राख्दैनन् जस्तो लाग्छ । यस्ता अवस्थामा शैक्षिक व्यापारीबाट कसरी जोगिने र आफ्ना नानीबाबुलाई सकेसम्म करियरमूखी शिक्षामा कसरी पथप्रदर्शक हुने भन्नेजस्ता कुरामा अभिभावक चनाखो हुनुपर्छ ।
रुचिको विषय छान्ने
डिपी लामिछाने,सह–प्रधानाध्यापक श्रम राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, कुमारीगाल
अहिले धेरै थरी विद्यालय छन् । अभिभावक कक्षा ११ कहाँ पढाउने भन्ने चिन्तामा पनि देखिन्छन् । मेरो विचारमा पहिला विद्यार्थीको क्षमता,रुचि र उसले भविष्यमा चाहेको उपलब्धिमा केन्द्रित हुनुपर्छ । ठूलठूला भवन,गाडी सुविधा जस्ता पक्षमात्र विद्यालय छनोटका आधार बन्नुहुन्न । हामीले त कक्षा ११ सञ्चालन गरेका छैनौं तैपनि म भाइबहिनीलाई भन्न चाहन्छु आफू भविष्यमा कुन क्षेत्रमा जाने हो त्यही बिषय छान्दा राम्रो हुन्छ ।
नजिकको विद्याल पढ्दा समय जोगिन्छ
दामोदर निरौला,अध्यापक नेसफिल्ड इन्टरनेसन कलेज,बटुक भैरव, ललीतपुर
कक्षा ११ कहाँ पढने ? के विषय पढने भनेर अहिले अभिभावक र विद्यार्थी साच्चै भौतारिएको अवस्था छ । साथीभाई आफन्तको सल्लाहमा पनि कतिले विद्यालय छनोट गरेका छन् । मलाई पनि के पढ्दा राम्रो हुन्छ, कुन विद्यालय छान्ने भनेर थुप्रैले सझाव माग्ने गरेका छन् ।
म विद्यार्थीलाई सबैभन्दा पहिला नजिक घरपायक पर्ने विद्यालय छान्न सुझाव दिन्छु । टाढा विद्यालय छान्दा धेरै समय वर्वाद हुन्छ । अर्को कुरा आफ्नो रुचि अभिभावको सुझाव र साथी सर्कलको सल्लाह पनि यतिबेला मान्ने हुन्छ । मुख्य कुरा विद्यार्थी आफू इमान्दार बन्ने हो कुनै पनि शिक्षण संस्थाले औषधि पिलाए झैं ज्ञान दिने त होइन । बाटो देखाउने हो हिडने त आफैं हो । तस्विरः रमेश दवाडी
प्रकाशित १९ असाढ २0७६ , बिहिबार | 2019-07-04 02:44:37